खाना हातले खानु राम्रो कि चम्चाले ? जानिराखौं - ramechhapkhabar.com
खाना हातले खानु राम्रो कि चम्चाले ? जानिराखौं
हातले खाना खानुको फाइदाहरूमध्ये एकभनेको यसले हाम्रो जिब्रो जलाउँदैन । जब तपाईं आफ्नो हातले खाना उठाउनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि तपाईं कति खाना खान लाग्नु भएको छ । यदि खाना धेरै तातो छ भने तपाईं लाई थाहा हुन्छ र त्यस लाई जिभ्रोमा लैजानुहुन्न । यसरी जिभ्रोलाई तातोबाट चाउनको लागि पनि चम्चाभन्दा हातले खाना खानु उपयुक्त हुन्छ ।